पर्यटन क्षेत्रमा आशाको सञ्चार : १० करोड लागतमा बसन्तपूर –स्वयम्भु वाकिङ ट्रेल बन्दै ! यस्तो छ ट्रेलको रुट - LaltinKhabar
पर्यटन क्षेत्रमा आशाको सञ्चार : १० करोड लागतमा बसन्तपूर –स्वयम्भु वाकिङ ट्रेल बन्दै ! यस्तो छ ट्रेलको रुट
काठमाडौं । विश्वसम्पदा सूचीमा सुचिकृत नेपालका दुई सम्पदामा काठमाडौं दरबार स्क्वाएर र स्वयम्भुलाई जोडेर पदयात्रा सञ्चालन गरीने भएको छ । पर्यटकिय क्षेत्र ठमेलबाट नजिकको दुरीमा पर्ने यी सूम्पदा २२ सय मिटरको दुरीमा मात्र रहेका छन । टे«ल बन्ने भएपछि पर्यटन व्यावसायिमा आशाको संचार गराएको छ । रहेका यी सम्पदालाई जोड्न काठमाडौं महानगरपालिकाले गुरुयोजना बनाएर तयार पारेको छ । महानगरपालिकाले यसको गुरुयोजना तयार पारेको र विश्वसम्पदा दिवसको अवसर पारेर अप्रिल १८ गते बिहिवार सार्वजनीक गर्ने ेजनाएको छ । महानगरपालिकाले सुरु गर्ने टे«ल सम्पन्न हुन झण्डै ३ बर्षको समयावधि लाग्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिकाका वडा नं. –१८ का अध्यक्ष विश्व सम्पदा दिवशका संयोजक अध्यक्ष न्हुच्छेकाजि महर्जनले यस्तो जानकारी गराएका हुन । यी दुई सम्पदालाई पदमार्गमार्फत जोड्ने योजना यसअघि समेत बनाएको थिया तर काार्यान्वयनमा लान भने सकेको थिएन । यसका लागि करिव १० करोडको लागत लाग्ने अनुमान महानगरको छ ।
महानगरले पदमार्गका क्रममा हनुमानढोका दरवार क्षेत्रबाट स्वयम्भुसम्म पुग्दा यस क्षेत्रका मुर्त अमुर्त सम्पदाको अवलोकन गर्न सकिने गरी टे«ल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको छ । यसका लागि सम्पदा पहिचानका बिभिन्न संकेत राखिने, स्थानिय घरहरुलाई परम्परमगत स्वरुपमा ल्याउने, स्थानीयता झल्कने चित्रकला प्रर्दशनी गर्ने, भित्तेचित्र प्रर्दशन,रुटमा पर्ने स्थानमा रहेका पाटि पौवा तथा सत्तलको मर्मतसम्भार र संरक्षण गर्ने भएको छ । साथै पदमार्गमा पर्ने मन्दिर ,पाटि, ढुङ्गेधारा, सत्तल लगाायतका मुर्त र साँस्कृतिक महत्वका अर्मुत सम्पदाहरुको अभिलेख ,प्रर्बधन र संग्रह गरी पदमार्गको विकास गर्ने महानगरको योजना रहेको छ । सम्पदा मार्गका बिभिन्न स्थानमा आर्ट ग्यालरी,पुस्तकालय तथा पर्यटन सूचना केन्द्रहरु रहनेछन ।
यस्तो छ सम्पदा पदमार्गको रुट
हनुमानढोका–काष्टमाण्डप–मरु गणेश–मरु हिटि–सन्तानेश्वर महादेव–मरुबहि –मिच्याः गल्ली–बन्जाः हिटी–साः (तेल मिल)–चस्वांध्द–सुन्ता गल्ली–पाछै गल्ली–नरदेवी धःछेँ आर्युवेदिक अस्पत्ताल–सामुदायिक गल्ली–बुरांखेल–म्येछ्यों हिटि–तप्यँताँ–रञ्जित मल्ल सतःघाट– भेलु महादेव –डल्लु चौतारा–भिमसेन मन्दिर–धिमे ल्वहं–चारा हिटी–भुँईखेल हुँदै स्वयम्भुमा आएर सम्पन्न हुनेछ । गत बर्ष समेत विश्व सम्पदा दिवशको अवसर पारेर पदयात्रा सञ्चालन गरिएको थियो ।